theZOMI: [mrsorcerer:37796] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] တေဇရဲ့စီးပွားအင်ပါယာ အတွင်းစည်း (၁)
[mrsorcerer:37796] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] တေဇရဲ့စီးပွားအင်ပါယာ အတွင်းစည်း (၁)
Subject: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] တေဇရဲ့စီးပွားအင်ပါယာ အတွင်းစည်း (၁)
Thein Win and 11 other friends were tagged in Minmaha Bagan's photo.
လုလု ခေါ် ကွမ်းလု ချမ်း ခေါ် ဇော်မင်းသည် Air Bagan တွင် ဒုဥက္ကဌ များ အဖြစ် ဆောင် ရွက် သူ ဖြစ်ပြီး အာဏာပိုင် က မျက်နှာသာပေး ခံရသူ ၏ လက်ထောက်များ အဖြစ် ၎င်း အကြံပေးများ အဖြစ်ဆောင် ရွက် သူများလည်း ဖြစ်သည်။ တရုတ် ၊ မကာအို နှင့် ဟောင်ကောင်တွင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်း များ ရှိ သူ လုလု သည် တေဇ ကို "သူ သိသမျှ အကုန် " သင် ပေး ခဲ့ သူ ဖြစ်သည်။
ထုံထိုင်း သော်လည်း ဥာဏ်များ သည့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ ကြိုက် တတ်သည့် ဟင်းလျှာ များ ကို အလွတ် ကျက်မှတ် ထား ရန် ပင် လုလု က တေဇ ကို သင်ပေး ခဲ့ သည်။ လုလု သည် အမေရိကန် ၏ ငွေကြေး ဆိုင် ရာ လွှဲပြောင်းပိတ်ဆို့အရေးယူဒဏ်ခတ် ခံရသူများ တွင် တစ် ဦး အပါအ၀င် ဖြစ်သည်။ သူ၏ အမျိုးသမီး မှာ အမေရိကန် နိုင်ငံသား ခံယူထားသူ ခင်ခင်အေးဖြစ်သည်။ သူက ဇော်မင်း ဆိုသည့် နာမည် ဖြင့် အမြဲတမ်း နေထိုင်ခွင့် လက်မှတ် အစိမ်းရောင် ကဒ် ရရှိ ထား ခဲ့ သူတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ စင်္ကာပူ လေကြာင်း ကုမ္ပဏီ တစ်ခု ဖြစ်သည့် Regent Air ၏ ပိုင် ရှင် ဂျော့ဆွန်း က ****** ကို ပြော ပြသည်မှာ
လုလု နှင့် တေဇ တို့သိကျွမ်းမှု သည် နှစ် နှစ်ဆယ် ကျော် ပြီ ဖြစ်သည်။ လုလု သည် စင်္ကာပူ တွင် အခြေစိုက် ပြီး ရုံးခန်း ဖွင့်လှစ်ထားသည့် တေဇ ၏ ပါဗို ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး တွင် လည်း အစုရှယ်ယာများ ထည့် ၀င်ထားသူ တစ်ဦး ဖြစ်သည်။
ပါဗို သည် မြန်မာ ပြည်မှ သစ် နှင့် ရေထွက် ပစ္စည်းများ ကို နိုင်ငံခြား သို့တင်ပို့ရန် ရည်ရွယ်ဖွင့် လှစ်ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံ ခြား မှ ပစ္စည်းများ လည်း သွင်း သည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ် တွင် မြန်မာ ပြည်ဉ် မွေးဖွား ခဲ့ သည့် လုလု သည် တေဇ ကို တရုတ် လက်နက် ကုမ္ပဏီ Norinco နှင့် မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ ပြီး ထိုလက် နက် ကုမ္ပဏီ မှ ထိပ်တန်း အရာ ရှိ များ နှင့် တေဇ သည် တရုတ်၊ စင်္ကာပူ တို့တွင် တွေ့ ဆုံး ခဲ့ ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံ သို့တရုတ်လက် နက် များ စီးဝင်မှု ပိုများ လာ ခဲ့ သည်။ +++++++ ၏ သတင်းပေးမှု တွင် တေဇ က ထို လက်နက် များ ကို သူ၏ Air Bagan လေယာဉ်များ ဖြင့် သွင်းယူခဲ့ သည်။ လုလု သည် တေဇ ကို အကောာင် သေး အဖြစ် မှ အကောင်ကြီး အဖြစ် ပြောင်းယူ ခဲ့ သူများ တွင် အခရာ ကျသူ ဖြစ်ပြီး သူ့ ကြောင့် တေဇ သည် ထိတန်း စစ်ဗိုလ်ချုပ် တို့ ၏ ရာသက်ပန် အကြီး အကဲ ၏ မိသား စု ၀င် အဖြစ် ရောက်ရှိ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ လုလု ၏ နောက်ထပ် တာဝန် တစ်ခု မှာ စစ်ဗိုလ်ချုပ် များ ပြည်ပ ခရီးထွက် ရာ တွင် ထိပ်တန်း ကြေး စား ဖာ များ ရှာ ပေး ခြင်း ဖြစ်သည်။
လုလု သည် ၎င်း ၏ စင်္ကာပူ မိတ် ဆွေ များ မှ တစ်ဆင့် ပြုစုယုယ ကောင်း သည့် ထိပ် တန်း ဖာများ ကို ဗိုလ်ချုပ် ရဲမြင့် ၊ ယခု ဒု-သမ္မတ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင် မြင့်ဦး တို့အတွက် ရှာ ပေး ခဲ့ ဖူး သည်။
၊စစ်အာဏာရှင် သန်းရွှေရဲ့အာဘော်လုံးလုံး လျားလျား ဖြစ်တယ်။ သူတို့ပိုက်ဆံ (မြန်မာ့ နိုင်ငံခြားရင်းကုန်သွယ်မှုဘဏ်-MFTB-MYANMAR FOREIGN TRADE BANK)မှာ ဝင်လာသမျှ ငွေတွေကို စင်ကာပူ ဘဏ်ထဲအကုန်သွင်းတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ ကျတော့ FEC နဲ့ လဲလှယ် ပေးတယ်။ ဒါ့ကြောင့်မြန်မာပြည်တပြည်လုံးရဲ့ နေ့စဉ် နိုင်ငံခြာ်းစီးပွားရေး ကုန်သွယ်မှု ငွေတွေအားလုံး ဟာဆိုရင်နေ့စဉ်ဆိုသလို စကာင်္ပူဘဏ်ထဲလိမ့်ဝင်နေတယ်။
အခြေအမြစ်မဲ့ပြီး မပြောပါဘူး၊။MFTB ဘဏ်ရောက်ဖူးတဲ့သူတိုင်း ဟာ လက်ကိုင်ဖုန်း ကိုင်ထားတဲ့- ထူးထရေးဒင်း- တေဇကလွှတ်ထားတဲ့စာရေးမ ပွဲစားမပါဘဲ ငွေထုတ်ငွေသွင်းမလွယ်ဘူးဆိုတာ အမှန် သိရှိကြလေရဲ့။ စာရေးမပွဲစား နော် ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာ သိန်း ရာချီ၊ ထောင်ချီတန် တိုက်ခန်းများစွာနဲ့။ သိန်းထောင်ချီတန်တဲ့ ကားများစွာ ပိုင်ကြတယ်။ ( စာရေးသူကိုယ်တိုင် သူတို့တွေအလုပ်၇ှာအဆင်မပြေချိန်မှာ-ကူညီဖူးခဲ့လို့အတွင်းသိအစင်းသိပေါ့။ တရားဝင်လစာက ၃၀၀၀ ကျပ်လေ။ နောက်တော့ အလုပ်ထွက်ပြီး အတွင်းလူနဲ့ ပယ်ပယ်နှယ်နယ်ကြီးကို - ဝင်လာသမျှ အမေရိကန်ဒေါ်လာတွေ၊ သန်းချြီဲ ပီး စင်္ကာပူကို နေ့စဉ် ထဲ့နေကြတာ၊ ပြည်တွင်းမှာတော့- အက်ဖအီးစီ-မြန်မာဒေါ်လာပေါ့။ ၁ ဒေါ်လာ ၆ကျပ်နဲ့တွက်တဲ့ ငွေအမျိူးအစားဆိုရင်-စဉ်းစားသာကြည့်ကြတော့-ထိုင်ရာက မထရဘဲ ဘီလီယံဖြစ်နေကြသူတွေ- သန်းရွှေကဦးစီးဦးဆောင်လေ-ငွေဆိုတာဘာလဲလာမပြောနဲ့။
ထားစရာ မရှိဘူး။ -ပြည်သူ့မျက်ရည်၊ဒုတ်ခ၊အသက်သွေးချွေးတွေနဲ့ ရင်းပြီးဝင်လာတဲ့၊ ငွေတွေ။အမလေး-အဲဒီပွဲစားစာရေးမတွေ နော်၊ စင်္ကာပူမှာ ဒေါ်လာသန်းချီတဲ့ အိမ်ဝယ်နိူင်တယ်။ နာမည်ရင်းနဲ့နော်။- ထူးထရေးဒင်းထဲတရက်ကို -မလွှဲရဘူးဆို၇င်- အနည်းဆုံးတော့ ဒေါ်လာ ၅သောင်းနဲ့ ၁သိန်းကြားမှာပါတဲ့။ လွှဲရတဲ့ရက်တွေမှာတော့ -ဒေါ်လာ ၂၀သိန်း အထက်မှာရှိတယ်- ဒေါ်လာ မှာ ၂ ကျပ် စားရရင် တွက်ကြည့်ပေတော့။- တလတလသန်းချီတဲ့ဒေါ်လာငွေတွေ ကစင်္ကာပူဘဏ်ထဲမှာ အေးအေးဆေးဆေးဘဲ။-စက်နဲ့လှည့်ထုတ်လို့ရတဲ့ မြန်မာဖြစ် FEC တွေကိုအစားထိုး- တေဇ တို့ တခြားဘာမှမလုပ်တောင်- နေ့စဉ်ဒေါ်လာသန်းချီဝင်တယ်လေ။ သန်းရွှေနဲ့ အတူတူစားပေါ့။ စင်္ကာပူလဲ ချမ်းသာဖို့ကလွှဲပြီး တခြားမကြည့်တဲ့တိုင်းပြည်၊မြန်မာပြည်က မြေကြီးရချင်လို့ မတရားငွေတေံမှန်းသိရက်နဲ့ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေတယ်။
မြန်မာပြည်ဒီလိုဖြစ်လေ ကြိုက်လေ။-စင်္ကာပူကဘဏ်ကိုစစ်ကြည့်လိုက်ပါလား-ဘယ်သူကို ထောက်လှမ်းရမယ်ဆိုတာလောက်တော့ ကောင်းကောင်းပြောပြနိင် ပါတယ်။ဘယ်လောက်များတဲ့ငွေတွေရှိနေမလဲဆိုတာ။ ပုဂံလေကြောင်းလိုင်းကို တေဇနဲ့့ သန်းရွှေ မိန်းမ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်တို့ အများဆုံး အစုရှယ်ယာတွေ ပိုင်ဆိုင်ကြပါတယ်။
မလေးရှားက ကဗာ့တတိယနေရာလိုက်တဲ့ ရာသီအေးအေး နှင်းဖွေးဖွေး အဲမြဲ ကျ နေတဲ့ GENTING HIGHLAND က CASINO ကိုအားကျပြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်ပူတာအိုကရေခဲတောင်တွေကိုရယူဖို့ကြံနေကြောင်းသတင်းတွေထွက်နေတာကြာပြီ။
တပ်မတော် (ကြည်းတပ်) နှင့် တေဇ၏ ချယ်လှယ်မှုအောက်မှာ နအဖတပ်မတော် (လေတပ်) ရောက်နေခြင်း။
လေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟောင်းတွေမှာ ဆရာကိုကြီး၊ ပြီးတော့ ဆရာတင်ထွန်း တက်လာတယ်၊ ဆရာသိန်းဝင်း တက်လာတော့ သူ့တပည့် ကျော်အောင် နဲ့ မျိုးတင် ကို အဆင့်ဆင့် ရာထူးပေးသွား လိုက်တာ ကျော်အောင် ဆိုတာ ရွှေမန်း နဲ့ တပတ်စဉ်တည်း၊ ရွှေမန်းတောင် ဗျူဟာမှူး ရှိသေးတာ၊ ကျော်အောင်က ဗိုလ်မှူးချုပ် ဖြစ်နေပြီ၊ သိန်းဝင်း ပြီးတော့ တင်ငွေ ၊ ကျော်သန်း ၊မြင့်ဆွေ တက်လာတယ်။
သိပ်မကြာဘူး မြင့်ဆွေ က ကျော်နေ၀င်း ကိစ္စမှာ ပါသွားတော့ မြတ်ဟိန်း ဖြစ်လာတယ်။ မြတ်ဟ်ိန်း က ၁၇ က ဆင်းတာ၊ ခင်မောင်တင်၊ တင်မောင်ထွန်း၊ မြတ်ဟိန်း (၃) ယောက်မှာ မြတ်ဟိန်းက အညံ့ဆုံး ၊ဒီလို ခပ်ညံ့ညံ့ကောင် လေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်မှ ကြည်းတပ်က စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရမှာ။ တရုတ်လေယာဉ်တွေ ကြည်းတပ်က စိတ်ကြိုက်ဝယ်တယ်။ ကောင်းကောင်း မကောင်းကောင်း မြတ်ဟိန်း ခေါင်းငြိမ့်ရတယ်။
လေယာဉ် တစ်စီးဝယ်ရင် မြတ်ဟိန်း က (၁၀) ရာခိုင်နှုန်း ရတယ်၊ သူ့မိန်းမ ထွေးထွေး က ခပ်လည်လည်ရယ်၊ သားလုပ်တဲ့ကောင်ကို တေဇ ဆီအပ်ပြီး ကျွန်ခံခိုင်းတယ်။ ပါမစ်ဆိုလည်း အားလုံး လိုက်လျှောက်နေတာ။ လေတပ်က အရာရှိတွေ နိုင်ငံခြားသင်တန်းတို့ တပ်ပြောင်းတာတို့ ကို ထွေးထွေးက ရွှေရရင် လုပ်ပေးတယ်။
ခင်အောင်မြင့် ကလည်း ခပ်ညံ့ညံ့ ပါပဲ။ မြတ်ဟိန်း ပြီးရင် သူတက်လာမှာ။ အခုလို ခပ်ညံ့ညံ့ လေတပ်ဦးစီးချုပ်များခန့်ပြီး ခိုင်းတာ အားလုံးလုပ် ပြန်မပြောရဲသောသူများမှ လေတပ်အား အုပ်ချုပ် နေသည်မှာ ရင်လေးစရာပါ။ လေတပ်အတွက် အသုံးဝင်သော လေယာဉ်များ၊ အပိုပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူရန် မတင်ပြရဲကြပါ။
တေဇ ဘာတွေ သုံးသလဲ? သိရသလောက်လေးပါ
ဦးတေဇ က စီးပွားရေးပတ်ဆို့မူကြောင့် ရှင်တို့မထိဘူး။ အလုပ်သမား သောင်းလေးထောင် ကျော်ပဲထိ တယ်လို့ ရှင်ပြောတယ်။ ဦးတေဇရယ်။ ရှင် ဒီလောက်ချမ်းသာနေတာ ကျမတို့ သိတယ်။ ရှင့် ပိုက်ဆံတွေ ထဲက အလုပ်သမားတွေကို ထမင်းကျွေးလိုက်ပါလား။ ရှင်သုံးဖြုံးခဲ့တဲ့ ဟာတွေ အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင် တောင် ဒီအလုပ်သမားတွေ ကို တနစ်စာလောက်ထမင်းကျွေးနိုင်ပါတယ်။
၁။ နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် မြန်မာပြည် သိန်းတန်ရဲ့သမီး ဖြိုးသီတာသိန်းတန်ကို စင်္ကာပူ အော်ချပ် လမ်းမှာ ရှိတဲ့ တာကာ ရှီမားယား ကုန်တိုက်က အကျီတထည် ( ဒေါ်လာ ၃ ထောင်တန်) အတွက် ကုန်ခဲ့တဲ့ငွေ။
၂။ ထက်ထက်မိုးဦးကို စိန်နားကပ် အကြီး တရံ ၀ယ်ပေးခဲ့တဲ့ငွေ။ (နှစ်ခုပေါင်း ၅ ကာရက်ခန့် ရှိတယ်။)
၃။ ၂၀၀၁ ခုနစ် နွေရာသီမှာ ဦးတေဇ အမေရိကား လပ်စ်ဗေးကပ်စ် ကို ရောက်တုံးက ကာစီနို မှာ ဦးတေဇ
၄။ ရန်ကုန် သမတ ရုပ်ရှင်ရုံနောက်က သမတ ကွန်ဒိုမှာ နေခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်လ်မလေး ( မူစလင်မလေး ) အတွက် ကုန်ခဲ့ရတဲ့ငွေတွေ ( ဥရောပ၊ စင်္ကာပူ ၊ ဘန်ကောက်တွေကို ကောင်မလေးကို အခေါက်ခေါက်အခါ ခေါ်ပြီး ဈေးဝယ်ခေါ်သွားခဲ့တာတွေ)
၅။ နန္ဒာလှိုင် အတွက် ရှင် ကုန်ကျခဲ့ရတဲ့ငွေတွေ။
၆။ စသဖြင့် ....စသဖြင့်.... ဦးတေဇာ ဘ၀ကြီး ပျော်ဖို့ပါးဖို့ ကုန်ကျခဲ့တဲ့ ငွေတွေလေ။
၇။ ဌာနပေါင်းစုံက ၀န်ကြီး ၊ ညွှန်ကြားရေးမူးချုပ်တွေရဲ့ သားသမီးမှန်သမျှကို အလုပ်ခန့်တယ်။ ဥပမာ
ရွှေမန်းရဲ့သား။ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး - ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်ရဲ့သား ၊ သစ်တောညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရဲ့သား စတဲ့ သားသမီးပေါင်းစုံကို ခန့်ခဲ့တယ်။ အရည်အချင်းမရှိဘဲ လခ အများကြီး ရှင်ပေးခဲ့တဲ့လို့ ကုန်ခဲ့တဲ့ငွေတွေ။
၆။ စသဖြင့် စသဖြင့်ဦးတေဇာ ဘ၀ကြီး ပျော်ဖို့ပါးဖို့ ကုန်ကျခဲ့တဲ့ ငွေတွေလေ။
လူ ကြီးလူကောင်းနာမည်ခံးဇာတိ ပြပါတော့ တယ်ခင်ဗျာ
ထိုင်းမှ၎င်း၏
Air Baganနှ စ် ပတ် လည် ပွဲသိုဖျော်ဖြေပေးရန်
လာရောက်သော ထိုင်းကချေသည်
Dancer အမျိုးသမီးအားတေဇမှ လူ ပုံ
အ လည် တွင်အ မရှိ၎င်း၏ဇာတိ မှန် ကို
ယခု လိုပြသခဲ့ပါသည်။
တေဇတင် ပဲ လားဆိုတော့ရှိသေးတယ် ရှေ့ ဆောင်နွားကြီးဖြောင့် ဖြောင့် သွါးတော့ နောက် ကနွားလေးတွေ ကလဲ
ဖြောင့် ဖြောင့်လိုက်ရမှာပေါ့
ဖအေ့ ခြေရာတထပ် တည်းနင်းနေတဲ့ ဒီ ပု တ် ထဲ က ဒီ ပဲ များဆန် ကုန်မြေလေး အ
လေအလွင့်ပြည်သူတွေ ဒု က္ခဆင်းရဲ မွဲတေနေချိန်၎င်းတို့ မိသားစု က
တိုင်းပြည်ရဲ အဆီအနှ စ်တွေ ကိုထု တ်ရောင်းစားပြီးပျက် စီးနေသော
Posted By Blogger to လူဗိုလ်ဟူသည် ... at 4/05/2013 10:45:00 AM